२०७३ भदौ १६ गते बिहीवार
२०७३ भदौ १६ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
जिप्रका भन्छ नष्ट गरियो, साक्षी भन्छन् थाहा छैन, कहा“ गयो १०६ बोरा पक्राउ परेको गुटखा
प्रस, वीरगंज, १५ भदौ / जिल्ला प्रहरी कार्यालयले साउन ३० गते बरामद गरेको गुट्खा गायब भएपछि अहिले खैलाबैला मचेको छ । जसको रोहबरमा गुटखा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले बोलाएको थियो तीमध्ये कसैले पनि गुटखा नष्ट गरिएको नदेखे पनि स्थलगत मुचुल्कामा सही छाप गरेको एकजना प्रतिनिधिले बताएका छन् । जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा तयार एउटा मुचुल्कामा भने गुटखा नष्ट गरिएको जनाइएको छ । वीरगंजका विभिन्न चारवटा गोदाममा छापामारी गर्दा फेला परेको एक सय ६ बोरा गुटखा साउन ३२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पठाएको प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबू श्रेष्ठले बताए । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारी हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याएको अर्को दिन नष्ट गरिदिने आग्रह गरेको थिए“, पछि नष्ट गरिएको कागजात मैले हेरें, त्यो सुर्तीजन्य पदार्थ राखिराख्नुहु“दैन भनेर नष्ट गर्न आग्रह गरेको एसपी श्रेष्ठले बताए । “रोहबरमा बस्ने प्रतिनिधिहरूस“ग जानकारी लिंदा स
निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्सामा चुनावी चहलपहल बढ्दै
प्रस, वीरगंज, १५ भदौ÷ नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्साको भदौ २४ र २५ गते हुने १० औं जिल्ला अधिवेशन र १४ औं वार्षिक साधारणसभालाई लिएर पर्साका निर्माण व्यवसायीहरू दुई चिरामा बा“डिएका छन् । तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष रमाकान्त चौरसियाको एउटा प्यानल छ भने अर्को निवर्तमान मोहनप्रसाद यादवको प्यानल चुनाव लड्ने तयारीमा छ । यस अघिको निर्वाचनमा मोहनप्रसाद यादवले नै रमाकान्तलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर अध्यक्ष रमाकान्तले निर्माण व्यवसायीको हकहितमा प्रभावकारी काम नगरेकोले निर्वाचनमा रमाकान्तलाई कडा प्रतिस्पर्धा दिने मोहनप्रसाद यादवले तयारी गरेका छन् । ३ सय ४३ कुल सदस्य रहेको निर्माण व्यवसायी सङ्घको अधिवेशन र भेला राधेमाईस्थित व्यवसायी सङ्घको भवनमा भदौ २४ गते शुरु हुनेछ । रमाकान्त खेमाका रामनारायण साह तेली अहिले पनि केही नबिग्रेको बताउ“छन् ।उनको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय टोली विवाद समाधान गर्न गठन भएको छ । सो टोलीले बिहीवार बिहान ९ बजेसम्म रमाकान्तको प्यानलस“ग मिलेर जाने कि पेलेर जाने बारे निष्कर्ष निकाल्ने छ । कुल १९ सदस्य जिल्ला कार्य समितिको लागि निर्वाचन हुने बताइएको छ । दुवै प्यानलको बा
पर्साको धानखेतीमा सिथब्लाइट रोगको प्रकोप
प्रमोद यादव, र·पुर, पर्सा, १४ भदौ÷ पर्साको धान खेतीमा सिथब्लाईट रोगको प्रकोप देखिएको छ । कृषि सेवा केन्द्र बिरुवागुठीका प्रमुख रूपकान्त झाले खासगरी सोनामन्सुली धानखेतीमा सो रोग देखा परेको बताएका छन् । उनले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी गाविसका किसानले आप्mनो बालीमा सिथब्लाइट रोग लागेको जानकारी गराएको बताए । पर्साको उत्तरी भेग हरपुर, बगवन्ना, बिरुवागुठी, कौवावन कटैया, गादी, सोनबर्सा, सखुवा परसौनी, बहुअरी पीडरी, पचरूखी, महुवन, भौराटाड, मधुवन मथवल, पटेर्वा सुगौलीलगायत गाविसमा सो रोग देखा परेको प्रमुख झाले बताए । उनले किसानहरू दैनिक २०–२५ को सङ्ख्यामा धानको बोट लिएर कृषि सेवा कार्यालय आउने गरेको बताए । कृषि सेवा कार्यालय बहुअर्वा भाठाका जेटिए कैलाश पंडितले सिथब्लाइट सरुवा रोग भएकोले धानखेतमा प्रकोपको रूपमा देखा परिरहेको बताए । उनले धानको पानी र हावाबाट सो रोग पैmलने बताए । धानको डा“ठ र पातमा अन्डाकार खैरो र·को थोप्ला हु“दै जाने र यो आकार वृद्धि हु“दै धानको बोट सुकाउने उनले बताए । उनले भारतबाट अनधिकृतरूपमा भिœयाइएको धानको बीउबाट यो समस्या देखा परेको बताए । उनले नेपाली
अनियमितता गरेको आरोपमा नासु यादव तानिए
प्रस, वीरगंज, १५ भदौ÷ मालपोत कार्यालय पर्साका नासु सुबेदार यादवलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंले केही कुरा बुझ्न विभागमा हाजिर गराएको छ । म·लवार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्री विक्रम पाण्डे वीरगंज आएको बेला मालपोतको निरीक्षण गर्ने क्रममा तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष्ँ सहरूम राउत गद्दी र नासु यादवबीच भनाभन भएको विषयमा मन्त्रीको आदेशमा विभागले नासुलाई हाजिर गराएको हो । नासु यादवले गद्दीले सेढवाको चार बिघा ऐलानी जग्गा गत वर्ष मालपोत कार्यालयले सरकारीकरण गरेपछि आपूm विरुद्ध भूmटो उजुरी गरेको कारण विभागले हाजिर गराएको बताए । उनले आपूmले नियमस·त काम गरेकोमा गद्दीले मन्त्रीलाई भूmटो कुरा लगाएको बताएका छन् । यता गद्दीले भने नासु यादवले पदको दुरुपयोग गरी पर्सा जिल्ला निचुटा गाविसमा रहेको १० बिघा जग्गा आफन्तको नाममा गराएर बिक्री गरेको हुनाले सो कुराको विरोध गरेको बताएका छन् । विभागको पत्रपछि नासु यादव आज काठमाडौं पुगेका छन् ।
खरकट्टालाई पराजित गर्दै वानस्टार अन्तिम चारमा
प्रस, ठोरी, पर्सा, १५ भदौ÷ हरितालिका तीजको अवसरमा ठोरीमा जारी लिगकम नकआउट पूmटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत नक–आउट चरणको बुधवारको खेलमा वान स्टार युवा क्लब जीवनपुर माडीले अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । गन्स एन्ड रोज खरकट्टा माडीलाई पाखा लगाउ“दै वान स्टारले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो । वान स्टारको जितका लागि सन्देश प्रजाले गरेको एक मात्र गोल निर्णायक बन्यो । खेललाई बराबरीमा पु¥याउन खरकट्टाले धेरै प्रयास गरे पनि, सार्थक बन्न सकेन । जितस“गै खरकट्टाले बिहीवार हुने थ्री स्टार युवा क्लब ठोरी–३ र आयोजक जनचेतना युवा क्लब ए टीमको विजेतास“ग सेमिफाइनलमा भिडन्त गर्नेछ । भाद्र १९ गते अर्थात् हरितालिका तीजको दिन हुने प्रतियोगिताको विजेता टीमले २१ हजार नगद, प्रमाणपत्र र ट्रफी हात पार्नेछ । प्रतियोगिताको उपविजेताले भने १० हजार नगद, प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्ने आयोजक रोशन थापाले जानकारी दिए ।
शिक्षामा भएको अपूरणीय क्षति र सडक यातायात
सञ्जय साह मित्र गत शुक्रवार चितवनमा एकाबिहानै भएको बस दुर्घटना नेपाली शिक्षाको इतिहासमा एउटा दुःखद दिनको रूपमा रहनेछ । देशले होनहार युवाहरू गुमाएको छ । शिक्षक बन्न हिंडेका दर्जनौं युवा बाटोमैं बस दुर्घटनामा परेर मरे । कम्तीमा दुई दर्जन मरेको अनुमान छ । कैयौं त स्थायी शिक्षक नै थिए । प्राथमिक शिक्षकको रूपमा स्थायी भएका शिक्षकहरू निम्न माध्यमिक शिक्षक बन्न पोखरा र दमौलीमा तोकिएको केन्द्र जा“दै थिए । कैयौं राहत, अस्थायी तथा करार शिक्षक थिए, जो आपूmलाई निम्न माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धायोग्य बनाएर पूर्णतया सरकारी शिक्षक बन्ने यात्रामा हिंडेका थिए । उच्च माध्यमिक तहमा र क्याम्पसमा पढाइरहेका शिक्षकहरू पनि आपूmलाई योग्य साबित गर्न र पूर्णतया भरपर्दो सरकारी शिक्षक बन्न परीक्षा दिन गइरहेका थिए । विभिन्न निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरू पनि परीक्षा दिन जा“दै थिए, भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने अभिलाषा मनमा लिएर । देशले दर्जनौं होनहार शिक्षित युवा गुमाउ“दाको पीडा कसैले मापन गर्न नसक्ने छ । मध्य रौतहटदेखि दक्षिणी रौतहटसम्मका विभिन्न शिक्षालयमा कार्यरत शिक्षा–दीपहरू कहिल्यै नब
मानिसको स्वभाव बुझ्न गा¥हो छ । यस स्वभावको कुनै सूत्र छैन, जसले मानव स्वभावलाई निर्देशित गरेर एउटा खास दिशा, सोच र बाटोमा लगाउन सकियोस् । मानव गतिविधि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छ । नकारात्मकलाई छाडेर सकारात्मकलाई अ“गाल्न राज्य व्यवस्थाले केही नियोजनात्मक नीति निर्धारण गरेको हुन्छ । प्रायः मानिस यस निर्धारणाको पालन गर्दछन् पनि, तर केही नीति–नियमलाई नै निषेध गर्न तम्सन्छन् । यस्तो अवस्था निकै दुरुह बन्न पुग्दछ । शुरुमा समाजले, पछि राज्यको निर्माण भएपछि, राज्यले मानिसमा नकारात्मकता नियन्त्रणका लागि कानुनको व्यवस्था ग¥यो । कानुनले मानिसलाई गर्न हुने र नहुने कुरामा छुट र वर्जना ग¥यो । तर पनि मानिस निषेध–उल्लङ्घनमा सदा तत्पर रहन्छ । यस्तो उल्लङ्घनले अपहत्ते आइलाग्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यही काम गर्न तम्सिन्छ । यस्ता काम सोची नसक्ने परिमाणमा मानव समाजमा देखिन्छ । त्यसैमध्ये अहिले नेपालमा चर्चित भएको छ मापसे । मापसे अर्थात् मादक पदार्थ सेवन । हुनत राज्यले मादक पदार्थ सेवनलाई निषेध गरेको छैन, तर मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउन भने वर्जित छ । मापसे प्रायः राति गरिन्छ । माद
२०७३ भदौ १५ गते बुधवार
२०७३ भदौ १५ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
राप्रपाको अञ्चलस्तरीय कार्यक्रम, बढी भाग खोज्दा एकीकरण भाँडियो –राणा
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ÷ राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता प्रक्रियामा हामी बाधक नभएको राप्रपाका अध्यक्ष्ँ पशुपति शम्शेर जबराले बताएका छन् । सबै हा“गा जोडेर वृक्ष बनाउने प्रयास गरिरहेको क्रममा एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको तर राप्रपा नेपालले भूmटो समाचार पैmलाएकोप्रति अध्यक्ष जबराले दुःख व्यक्त गरे । उनले अन्तरिम विधान अनुसार राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्ष हुने सहमति भए पनि अधिकारको बा“डफा“ड भएको हेर्दा राप्रपा नेपालले बढी माग गरेपश्चात् विवाद उत्पन्न भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वीरगंजमा आयोजित नारायणी अञ्चलस्तरीय कार्यकर्ता उत्प्रेरणा तथा जनचेतना कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष जबराले अन्तरिम विधान संशोधन गरे आपूm सहमत हुने बताए । पार्टीको धारणा व्यक्त गर्दै मधेसमा दुई प्रदेश र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दू राज्य स्थापना पार्टीको एजेन्डा रहेको र यसको पक्षमा पार्टी अगाडि बढिरहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता तथा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी अगा
सीमावर्ती इनर्वाबाट एकैदिन मापसेमा ४८ जना पक्राउ, बिहानै मदिरा सेवन–बिक्री गर्नेलाई कारबाई गर्न माग
११ महिलामाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दा जिप्रकाबाट गएको टोलीले गएराति ८ बजे भन्सार क्ष्ँेत्रबाट पक्राउ परेका ११ महिलासहित एकजना पुरुषविरुद्ध सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरेको छ । हिजो राति प्रहरीले भन्सार क्ष्ँेत्रमा अवाञ्छित क्रियाकलाप बढेको गुनासोपछि लज र होटलहरूमा छापामारी गरेको थियो । छापामारीको क्रममा शड्ढास्पद ११ महिला पक्राउ परेका थिए भने एकजना मात्र पुरुष समातिएका थिए । प्रहरीले पसलेलाई पनि निर्घात कुटपिट गरेको थियो । सो क्षेत्रको विजय होटललगायत पा“चजना होटल साहुलाई टाइगरटोलीका प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको विरोधमा आज स्थानीय बासिन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी सुरक्ष्ाँ माग गरेका छन् । प्रस, वीरगंज, १४ भदौ÷ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले हिजो एकै दिन ४८ जनालाई मापसेमा कारबाई गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्सा र वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको संयुक्त चेकजा“च टोलीले वीउमनपा–१९, इनर्वा भारतीय सीमा नजिक सडकखण्डमा मापसे चेकजा“च गर्दा ४८ वटा सवारीसाधन चलाउने व्यक्तिहरू कारबाईमा परेको जिप्रका पर्साका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । ट्रा
हिन्दूहरूको पशुबलि प्रथा रोक्ने अभियान किन ?
सुदर्शनराज पाण्डे ईश्वरको सृष्टि यस संसारमा आदिम मानिसहरूका सन्तान शिकारी युग, कृषियुग, औद्योगिकयुग हु“दै विज्ञान र प्रविधि, सूचना प्रविधिको यस युगमा आइपुगेको हो । संसार परिवर्तनशील छ । प्रत्येक मानिसको औंलाको छाप एक अर्कोस“ग नमिलेभैंm अनुहार, विचार, तर्क पनि नमिल्न सक्दछ । सत्य एउटै छ – मानिसले जन्म लिएपछि मर्नैपर्छ । संसारमा मनुष्यका दुई जात स्त्री र पुरुष मात्र छ । चन्द्र, सूर्य र पृथवी एउटै छ । सबैको साझा छ । विचार र दृष्टिकोण पनि कतिपय अवस्थामा साझा हुन्छ । धर्म धेरै छन् । ईश्वरका स्वरूप धेरै छन् तर ईश्वर एकै छन् । प्रकृतिको नियम एकै छ । मानिसका नियम, व्यवहार, जीवनपद्धति, संस्कार, प्रवृत्ति बेग्लाबेग्लै छन् । यस संसारमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र अध्यात्मवादबीच अन्तर्विरोध छ । धार्मिक द्वन्द्व र युद्ध जारी छ । मानिस मानिसबीच काटमार चलिरहेको छ । आसुरी प्रवृत्ति र दैवी प्रवृत्तिबीच द्वन्द्व कायम छ । नेपाल जेठो देशमध्ये एक हो । यो प्राचीन देश देवभूमि हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको नेपाल हिमालयको काखमा बसेको पवित्र हिमवत् क्षेत्र हो । नेपालका हिमनदीहरू छन् । प्राकृतिक व
कस्ताकस्ता जाली कारनामा
कुनै पनि काम गर्नका लागि इच्छुक व्यक्ति त्यस काममा पोख्त हुनुपर्छ । पोख्त नभएसम्म त्यस व्यक्तिले गरेको काम पूर्ण हुन सक्दैन । यस अवस्थामा योग्यता नभइकन पनि कसैले कुनै काम गर्ने अनुमति पाउ“दछ र काम बिग्रेर कर्ताले क्षति बेहोर्दछ भने कर्मको फल भन्न सकिन्छ । तर यदि काम संवेदनशील छ, त्यस्तो काम बिग्रेको अवस्थामा धेरैले क्षति बेहोर्नुपर्छ भने राज्यले जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । डाक्टर, सवारीसाधन (मामुली रिक्शादेखि हवाईजहाजसम्म) चालकलगायतले गर्ने काममा खति भयो भने धेरैले क्ष्ँति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधन चलाउने व्यक्ति त्यसैले आप्mनो काममा निपुण हुनुपर्दछ । ऊ आप्mनो काममा निपुण छैन वा खारिएर परिपक्व भइसकेको छैन भने उसलाई कामको जिम्मा दिन सकिंदैन । राज्यले यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना गरेको यसै कारणले हो कि जस्तोसुकै पनि सवारी साधन चलाउने व्यक्ति आप्mनो काममा कति निपुण छ, त्यसको यकिन गरेर मात्र अनुमतिपत्र देओस् । राज्य आफैंमा पूर्ण हु“दैन । एउटा व्यक्तिको योग्यता जा“च्न राज्य एक्लैले सक्दैन, त्यसैले उसले विभिन्न निकाय, संस्था वा व्यक्तिको मदत लिनुपर्दछ । सवारी साधन चलाउने अनु
२०७३ भदौ १४ गते मङ्गलवार
२०७३ भदौ १४ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
‘कस्ताकस्ता जाली कारनामा’, चालक अनुमतिपत्रको लागि प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र बिक्री गरेको आरोपमा चारजना सञ्चालक पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ÷ वडा प्रहरी कार्यालय, श्रीपुरले चालक अनुमतिपत्रको लागि प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र बिक्री गरेको आरोपमा चारजना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ । जीप, कार, डिलेभरी भ्यान, टेम्पो, मिनी बस, ट्याक्टर चलाउन लाइसेन्स चाहिने र लाइसेन्स लिन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने हु“दा सञ्चालकहरूले नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडि बिक्री गरिरहेको सूचना पाएर प्रहरीले पक्राउ गरेको वप्रका श्रीपुरका प्रनि ऋषिराज ढु·ानाले बताए । पक्राउ पर्नेमा नारायणी ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक विकास बैठा, अधिकारी ड्राइभिङ सेन्टरका विमल अधिकारी, बाबा ड्राइभिङ सेन्टरका श्याम सिंह क्षत्री, श्रेष्ठ ड्राइभिङ सेन्टरका दीपक श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मोटो रकम लिई नक्कली प्रशिक्ष्ँणपत्र बनाउने गरेको तथा ती ड्राइभिङ सेन्टरहरू यातायात कार्यालयबाट अनुमतिसमेत नलिएको प्रहरीको भनाइ छ । बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई झुक्याई सो प्रमाणपत्र दिंदै आएको क्रममा प्रहरीले चारजनास“गै ड्राइभिङ सेन्टरको आवश्यक कागजात, प्रमाणपत्र, छाप–मोहर तथा फोटाहरू, अन्य व्यक्तिको नागरिकताहरू बरामद गरेको छ
गोपाल सेवा समितिको आयोजनामा ४ महिलासहित ५३ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ÷ गोपाल सेवा समिति वीउमनपा–१६ राधेमाईले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा चार महिलासहित ५३ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रक्तसञ्चार केन्द्र, वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले गोपाल सेवा समितिद्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सुरेन्द्रप्रसाद यादव, कमल यादव, अमितकुमार साह, कृष्णकन्हैया कायस्थ, दिनेश साह कानू, नीलम कर्ण, पुरुषोत्तम चौरसिया, शिवनारायण यादव, प्रमोद साह, धर्मराज साह, दिपेन्द्र यादव, मञ्जु देवी, शिवनारायण यादव, हजारी यादवलगायतले रक्तदान गरेको बताए । रक्तदान कार्यक्रम गोपाल सेवा समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा भएको थियो भने रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका धीरेन्द्र झा, निरञ्जन गुप्ता, सुशील साह, सुनील चौधरी, कृष्ण मुरारीलगायतले प्राविधिक सहयोग पु¥याएको प्रमुख मानन्धरले बताएका छन् ।
झौवागुठीका महिलाहरूले पानी मागेपछि वर्षा पनि भयो
प्रस, परवानीपुर, पर्सा, १३ भदौ÷ झौवागुठी गाविस, झौवाटोलका महिलाहरूले आज बिहानैदेखि गाउ“मा पानी माग्ने कार्यक्रम आयोजना गरे। विगत तीन सातादेखि बारा, पर्सा क्ष्ँेत्रमा पानी नपर्दा खडेरीको अवस्था उत्पन्न भएपछि धार्मिक विश्वास अनुसार महिलाहरूको टोलीले पानी माग्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको महिला अगुवा पार्वतीदेवीले बताइन् । बिहानदेखि गाउ“ परिक्रमा गरी घरघरमा पुगेर बासिन्दाहरूस“ग धाराको पानी गाग्रीमा सड्ढलन गरिएको थियो भने रुपिया“ पैसा पनि इच्छानुसार मागिएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत महिला तथा बालबालिकाहरूले गाउ“का बासिन्दामाथि पानी छ्यापेका थिए । दिउ“सो चार बजेपछि इन्द्र भगवान् प्रसन्न भएर वर्षा गराएको भनी महिलाहरू द· छन् । खडेरीबाट बारा, पर्साका किसान ठूलै मर्कामा परेका छन् । खडेरीले धानबाली सुक्न थालेपछि झौवास“गै अन्य गाउ“मा पनि महिलाहरूले पानी माग्ने कर्मकाण्ड गरेका छन् । जिल्लाको करिब १४ हजार हेक्टरमा धानबाली लगाइएकोमा करिब ५ हजार हेक्टर बाली खडेरीको कारण नष्ट हुन लागेको किसानहरूले बताएका छन् । बिन्दवासिनीका किसान छठुप्रसाद यादवका अनुसार पर्सालाई सरकारले सुक्
दिनरातको कचकचले पत्नीद्वारा आत्महत्या
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ÷ पतिमाथि लागेको भ्रष्टाचार तथा ठगी आरोप सहन नसकी एकजना महिलाले आज आप्mनै कोठामा पासो लगाई आत्महत्या गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । वीउमनपा–१६ तेजारथटोल निवासी ३० वर्षीया सुषमा श्रेष्ठले आज बिहान ८ बजे घरमा कोही नभएको बेला आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । सुषमाका पति हिमालय ऋण तथा बचत सहकारी सस्था माईस्थानका अध्यक्ष्ँ हुन् । असार महिनाको दोस्रो हप्तामा बचतकर्ताको अढाई करोड रुपिया“ लिई फरार भएका थिए । फरार भएलगत्तै अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । स्थानीय तथा बचतकर्ताहरूको आग्रहमा प्रहरीले ठगी मुद्दा नचलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने शर्तमा उनलाई दुई हप्तापछि थुनामुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठले सहकारीले गरेको ऋण लगानी उठाउ“दै बचतकर्ताहरूलाई रकम दिंदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । प्रहरी उपरीक्ष्ँक डा. राजुबाबू श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रत्येक हप्ता फिर्ता गरेको रकमबारे जनकारी पनि गराउ“दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पतिमाथि लागेको आरोप तथा बचतकर्ताहरूको दबाबका कारण सुषमा मानसिक तन
मधेस आन्दोलनको मुद्दा पन्छाउन राजधानीको कुरा उठाएको आरोप
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ÷ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, पर्साको बैठक सम्पन्न भएको छ । आज सम्पन्न बैठकले मधेस आन्दोलनले उठाएको मुद्दा प्रभावित पार्ने हिसाबले नियोजित तरिकाबाट वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने कुरालाई मलजल दिने काम भइरहेको निर्णय गरेको छ । बैठकले एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि यस कुरालाई बढी मलजल गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मधेसी जनतालाई गुमराहमा नपर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले प्रान्तको सीमा निर्धारण भएपछि पर्सा, बारा, रौतहटका जनतालाई सुविधा हुने तरिकाबाट उच्च अदालत वीरगंजमैं राख्न जोडदार माग गरिने निर्णय गरेको छ । प्रान्त निर्धारण, स्रोत, साधन र शक्तिको बा“डफा“ड नभएको अवस्थामा उच्च न्यायालय नचलाउन पनि मोर्चाले आग्रह गरेको छ । बैठकले एमाले सत्तामा रह“दा प्रदेश नं. २ को राजधानी धनुषाको ढल्केवरमा राख्ने निर्णय गरेको र अहिले आएर प्रादेशिक राजधानीको हल्ला चलाएर एकापसमा फुट ल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । बैठक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवको अध्यक्ष्ँतामा बसेको थियो । बैठकमा मोर्चास“ग आबद्ध नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव शिव पटेल,
संविधान कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भुमिका
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान एक वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानले एक वर्ष पूरा गर्न लागे पनि कार्यान्वयनको चुनँैती अद्यापि कम हुन सकेको छैन । नया“ संविधानले गणतन्त्र,७ प्रदेशसहितको सङ्घीयताको सुनिश्चितता गर्नुका साथै न्यायपालिकाको जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको साबिकै संरचनालाई निरन्तरता दिएको छ । मूलभूतरूपमा तीन तहकै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरे पनि न्यायपालिकाको आन्तरिक अन्तर्वस्तुमा आमूल परिवर्तन भएको छ । अर्धन्यायिक निकायहरूको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्नु, अन्तर्कालीन आदेश उपर अदालती बन्दोबस्तको १७ न. बमोजिमको निवेदन सुन्न, एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने सबै फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुनवाइ हुने र केही रिटको पनि सुनवाई गर्नेलगायत अधिकार जिल्ला अदालतलाई सुम्पेर पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान भएको छ । मौलिक हकको प्रचलन, सबै खाले रिटको सुनवाइ मातहतका सबै न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायको नियन्त्रण अनुगमन, प्रदेश–प्रदेश विवादमा निर्णय दिने, सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको सुनवाइ लगायत अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान हुनुले उच्च अदालतलाई स
कति राम्रो हुन्थ्यो
मौसम विज्ञान र ज्योतिषिहरूले यस वर्ष राम्रो वर्षा हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी गरिरहेकै बेला, धानमा बाला लाग्ने मध्य बेलामा पानीको अनिकाल देखिन थालेको छ । यो बेला धानमा बाला लाग्न उखरमाउलो गर्मी, वातावरण ओसिलो र सिमसिम पानी पर्नु लाभदायक हो । गर्मीले त मानिसलाई आच्छु–आच्छु पारेको छ तर पानी परिरहेको छैन । जुन बेला खेतमा टन्न ६ इन्चसम्म पानी रहनुपर्ने हो, धानबाली पहेंलिने र डढ्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तोमा बाली सप्र“दैन । बाली नसप्रेपछि यसैको भरमा जीवन निर्वाह गर्ने परिवारका लागि अप्ठेरो त हुने नै भयो । तर धान जीवन निर्वाहका लागि मात्र होइन, यस भेगका मानिसहरूको लागि धार्मिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक महŒव पनि राख्दछ । त्यसैले, खासगरी महिला तथा युवाहरू, स्वभावले नै संवेदनशील र भावुक भएकाले, पानी पार्नका लागि विभिन्न परम्परागत आस्थालाई भर दिन एक अर्कामा पानी, हिलो आदि छ्यापाछ्याप गर्ने, मन्दिर धाएर पूजा गर्ने, सबैको सहभागिता र स्वीकृति रहोस् भनेर चन्दा उठाई मिठाइ किनेर गाउ“मा बा“ड्ने गर्न थालेका छन् । यसरी गर्दा वर्षाको देउता इन्द्र खुशी हुनेछन् र वर्षा गराउनेछन् । कुनै घटना सम्बन्धमा मानि
२०७३ भदौ १३ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
२०७३ भदौ १२ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
मध्यक्षेत्रीय ट्राफिकद्वारा सवारीका साधनमा टाइमकार्डको व्यवस्था
प्रस, परवानीपुर, पर्सा, १२ भदौ÷ मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैयाले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गत सवारीका साधनहरूमा टाइमकार्ड व्यवस्था लागू गरेको छ । वीरगंज र पूर्वका जिल्लाहरूबाट पथलैया हु“दै हेटौंडा, चितवन, पोखरा, काठमाडौं, बुटवल, नेपालगंज, धनगढीलगायत लामो दूरीका सवारीका साधनमा कडाइ गर्दै टाइमकार्डको व्यवस्था गरेको हो । काभ्रेपछि हालै गत शुक्रवार त्रिशूली नदीमा डुबेको बस र ट्याक्टरको घटनापछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले थप कडाइ गरेको जनाएको छ । कार्यालयले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि टाइमकार्डका साथै दिवा तथा रात्रि सेवाका बसमा खासगरी कडाइ शुरु गरेको जनाएको छ । पथलैया भएर दैनिक करिब ४ सय बस आवतजावत गर्ने गरेको र सो बसको प्राविधिकदेखि कागजी प्रमाणको ठाउ“–ठाउ“मा चेकजा“च भइरहेको जनाइएको छ । यसैबीच काभ्रेको घटनालगत्तै नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैयाले पथलैया–चितवन यात्रुवाहक बसमा टाइमकार्ड लागू गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि पथलैयाबाट हेटौंडा २८ किलोमिटर ४५ मिनेटमा, हेटौंडाबाट मनहरी ३५ किलोमिटर ४२ मिनेटम
उच्च न्यायालयसम्बन्धी बारको निर्णयप्रति राजनीतिक दलको समर्थन
प्रस, परवानीपुर, १२ भदौ÷ शनिवार पर्सा नेपाल बार एशोसिएशन एकाइले गरेको निर्णयको पर्साका राजनीतिक दलका अगुवाहरूले समर्थन गरेका छन् । बार एकाइ पर्साले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राजनीतिर्मीहरूले समर्थन गरेका हुन् । स्थापना हुन लागेको प्रदेश नं २ को उच्च न्यायालयको पर्सा, बारा र रौहतटको तीन जिल्लाको पुनरावेदन मुद्दा हेर्न वीरगंजमैं केन्द्र राख्न राजनीतिकर्मीहरूले सुझाव तथा समर्थन जनाएका छन् । जनकपुरमा केन्द्र राखियो भने पर्सा, बारा र रौतहटका न्याय उपभोक्तालाई असहज हुने भन्दै समर्थन जनाएका हुन् । पर्सा बार एकाइ अध्यक्ष प्रमोद प्रसादको अध्यक्षता तथा सचिव सन्तोष श्रीवास्तवको सहजीकरणमा बारको सभाहलमा सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यव्रmममा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव ,मजफो लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य शशिकपुर मिया“, सद्भावना पार्टीका वीरगंज नगरसभापति ओमप्रकाश सर्राफ, नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय महासचिव शिव पटेल, नेपाली काङ्ग्रेस पर्सा सचिव अशोक जैसवाल, एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रह्लाद गिरी, नया“ शक्तिका पर्सा संयोजक बलिराम साह, क्ष
पोखरिया अस्पतालमा आँखा जाँच सेवा शुरु भएपछि बिरामीको चाप बढ्यो
प्रस, वीरगंज, १२ भदौ÷ पोखरिया अस्पतलमा सेवा विस्तार पछि अहिले बिरामीको चाप बढेको छ । अस्पतालको नया“ भवन निर्माणपछि एक महिनादेखि आखा“ परीक्षण शुरु भएपछि अहिले बिरामीको चाप बढेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष्ँ उमेश चौहानले बताए । डा. मनोरञ्जन यादवको नेतृत्वमा आ“खाको बाहिर· विभाग सेवा शुरु भएपछि अहिले बिरामीको चाप बढेको चौहानको कथन थियो । ग्रामीण भेगमा यो नै पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट आ“खाको सेवा दिने गरेको चौहानको भनाइ छ । अस्पतालमा आ“खा सेवा शुरु भएपछि अहिले विभिन्न गाविसबाट बिमारीहरू आउने गरेको तथा सेवा लिएपछि खुशी व्यक्त गर्ने गरेको उनले बताए ।
आगे राजनैतिक दल की मर्जी
–कुमार रुपाखेती पञ्चायती व्यवस्थालाई हामी निरङ्कुश र तानाशाही भन्ने गर्दथ्यौं । यो व्यवस्था समावेशी, सङ्घीयताको विपक्षी मानिन्थ्यो, तर पञ्चायतको इतिहास पल्टाउ“दै यी सबै कुरा भूmटा र बकवास लाग्न थालेको छ । त्यतिखेर पा“च विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला थिए । प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय पञ्चायत र स्थानीय निर्वाचन नबिराएर सम्पन्न हुन्थ्यो । स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न जातजाति, उपल्ला–तल्ला वर्ग जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे । नियमित निर्वाचन हुने भएकोले मान्छेहरू खेमा–खेमामा विभाजित भई गलत सहीबारे भेला गरी छलफल गर्थे, विकास निर्माणका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन्थे । पर्सा जिल्लामैं फजील अहमद पटक–पटक जिल्ला सभापति बने, कबुतरी देवी ‘ह“सिया छाप’ झन्डै वीरगंजको मेयर बन्नेवाला थिइन्, हेटौंडा नगरपालिकामा ओम्बु टेम्पा लामा मेयर नै भइन्, नानीमैया“ दाहाल रापस बनिन्, त्यस्तै समावेशी तरिकाले थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू नियमित निर्वाचित हुने प्रचलन थियो । नियमित र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने भएकोले गाउ“देखि शहरसम्म निर्वाचनको लहर र रौनक देखिन्थ्यो । त्यतिखेर बिहारमा दशौं वर्षदेखि स्थानीय निर्वाच
कल्पनाशीलता भर्सेज शिक्षा
अनन्तकुमार लाल दास बचपन कल्पनाको उडान भर्ने समय हो । यस बेला केटाकेटीहरू पारिवारिक, सामाजिक र सांसारिक चिन्ताबाट मुक्त हुन्छन् । यस बेला उनीहरूको बालमन कल्पनालोकमा रमेको हुन्छ । उसले कहिल्यै आपूmलाई कार्टुनको विभिन्न पात्रस“ग जोड्छ भने कहिले कथाहरूको माध्यमबाट परीहरूको दुनिया“मा घुमिरहेको हुन्छ । कहिले चराहरूजस्तै खुला आकाशमा उड्ने कल्पना गर्छ भने कहिले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी खेल्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तै कल्पनाशीलताले भविष्यमा उसलाई एउटा सजग र जिम्मेवार नागरिक बनाउने महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तै कल्पनाले ऊभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारको पनि निर्माण गर्छ । यसले केटाकेटीहरूलाई आप्mनो छरछिमेकप्रति संवेदनशील र चिन्तनशील पनि बनाउ“छ जो एउटा समाजको विकासको लागि धेरै आवश्यक हुन्छ । यस कारण शिक्षा क्षेत्रमा यसको उपयोगिता झन् बढेर जान्छ । वर्तमान आवश्यकता भनेको विद्यालयहरूमा केटाकेटीहरूको कल्पनाशीलता र रचनात्मकतालाई विकसित गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहनु हो । यसको लागि विद्यालयको संरचना यस्तो हुनुपर्छ जहा“ उसले आप्mनो कल्पनाको सागरमा डुबुल्की मार्न सकोस् । अब के प्रश्न उठ्छ
कुनै वस्तुको अभाव हुनेछैन...तर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टेलीवार्तामा दशैं–तिहारको अवसरमा कुनै वस्तुको अभाव हुनेछैन भन्ने उद्घोष गरेका छन् । यस्तो अभाव त नेपाली जनतालाई कहिले पनि भएन । भर्खर बितेको छ महिने मधेस आन्दोलन तथा चार महिने सीमा नाकाबन्दीमा पनि भएन । भारत सीमावत्र्ती गाउ“–नगरको कुरै छाडौं, सरकारपालित तस्करहरूले राजधानीसम्मको जनतालाई कुनै कुराको अभाव हुन दिएनन् । यो अलग कुरा हो, ती सबै सामान मह“गा थिए, मिसावटी थिए । तर ती वस्तु तिनले मात्र पाए, जोस“ग खरिद गर्ने क्षमता थियो । एकताका राजधानीमा रु १ हजार प्रतिलिटर पेट्रोल पनि मानिसले किने । वस्तु अपर्याप्तता निर्धन, विपन्न जनतालाई मात्र हुने हो । र धनीलाई पनि प्राप्त हुने वस्तुको शुद्धताको ग्यारेन्टी भएन । त्यो आज पनि नेपाली बजारमा छैन, यही छा“टका“टको सरकार रहिरह्यो भने भविष्यमा पनि हुनेछैन । यसर्थ दशैं–तिहार वा अन्य पनि कुनै बेला वस्तुको अभाव हुनेछैन भनिरहनु यथार्थमा आवश्यक छैन । सरकारहरूले भाषणबाजी गरेर नेपालीइतर समाजलाई आश्वस्त पार्नु अलग कुरा हो । पहिले–पहिलेका सरकारहरूले दशैं, किनकि यो यस देशका अधिसङ्ख्य हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान्
२०७३ भदौ ११ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ल्याब अनुगमनको नाउँमा कर्मचारीद्वारा पक्षपात
प्रस, वीरगंज, १० भदौ÷ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साले केही दिन पहिलेदेखि शुरू गरेको ल्याब अनुगमन कार्य प्रलोभनमा परी गरिरहेको अनुगमन समितिका केही सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोनन्ति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७० जारी भएपछि जिल्लामा रहेका निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, पोली क्लिनिक, हस्पिटल, ल्याब, एक्सरेलगायत अन्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा दर्ता प्रक्रियाको अधिकार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाएको छ । निर्देशिका जारी भएपश्चात् तत्कालै लागू गर्न स्वास्थ्य विभागले निर्देशन जारी गरे पनि पर्सामा ३ वर्षपछि अनुगमनको प्रक्रिया शुरू भएको हो । आप्mनो चिनजान तथा नजिकका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य क्लिनिकलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कागजातहरू तयार भएपछि मात्र अनुगमन शुरू गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन शुरू भएको दिनदेखि नै पैसाको चलखेल शुरू भएको थियो । दुई दिनसम्म चलेको अनुगमनको क्रममा व्यापक अनियमितता भएको र अहिले अनुगमन कार्य रोकिएको अनुगमन समितिका केही सदस्यले बताएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य
स्थानीय सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस बदर
प्रस, वीरगंज, १० भदौ÷ स्थानीय सिफारिस समितिले भदौ ५ गते माओवादी केन्द्रको भवन निर्माणको लागि ५ कट्ठा ऐलानी सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षको लिजमा भोगाधिकारको लागि सिफारिस गरेको निर्णय बदर गरेको छ । शुक्रवार स्थानीय सिफारिस समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको अध्यक्ष्ँतामा बसेको बैठकले भदौ ५ गते गरेको सिफारिस बदर गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका एकजना सदस्यले निर्णय बदर भएको प्रतीकलाई बताए । समितिले वीउमनपा–१७ मझडिहा पिपरामा रहेको सार्वजनिक ऐलानी १ बिघा ११ घुर जग्गामध्ये ५ धुर माओवादी केन्द्र पर्साको भवन निर्माणको लागि ५० वर्षको भोगाधिकार रहने गरी लिजमा उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेपछि यसको व्यापक विरोध भएको थियो । एमाले, मधेसी मोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले व्यापक विरोध गरेपछि समितिले आज बैठक गरी सिफारिस गरिएको निर्णय बदर गरेको हो ।
निजगढमा धारिलो हतियार प्रहारबाट दाउरेको मृत्यु
प्रस, निजगढ, १० भदौ÷ बाराको निजगढस्थित ज·लमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक दाउरेको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा निजगढ नगरपालिका–५ बस्ने ४१ वर्षीय हीरालाल लु·वा रहेका छन् । मृतक लु·वास“गै साथी गएका सुस्त श्रवण भएका एक स्थानीयले आप्mनो साथीको टाउकोमा प्लास्टिकले छोपेर अज्ञात व्यक्तिले टाउकोमा लट्ठीले प्रहार गरी मारेर बोकेर लगेको भन्दै बाटो हिंड्नेहरूस“ग गुहार मागेका थिए । प्रहरी टोली र गाउ“लेले सा“झ अबेर लु·वा मृतावस्थामा ज·लमा फेला पारेका थिए । घटनामा संलग्न भएको आशड्ढामा घटना भएको ज·ल आसपासबाट इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी नायब निरीक्षक भाइकाजी पोखरेलको टोलीले एक शड्ढास्पद युवकलाई शुक्रवार दिउ“सो पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रौतहट गौर–५ घर बताउने महमद आजाद अन्सारी रहेको इप्रका निजगढले जनाएको छ । अन्सारी काठमाडौबाट पूर्वतर्पm जा“दै गरेको ना. ५ ख ४९५० नम्बरको बसबाट आउ“दै थिए । अन्सारी चलिरहेको बसबाट नै एक्कासि हाम फाल्न लागेपछि चालकले बस रोकेपछि उनी राजमार्गको निजगढ फास्ट ट्रयाक उत्तरतर्पmको ज·लभित्र बिहान करिब ८ बजे पसेको निजगढ प्रहरीले जनाएको छ । लु·वाम
चोरी, अपहरण, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान शुरू
प्रस, रौतहट १० भदौ÷ रौतहट जिल्लाको गाविस हर्षाहा बस्ने वर्ष २८ को बालकिशोर चौरसियामाथि चोरी, अपहरण, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले दर्ता गरेको छ । रौतहट जिल्लाको गाविस मर्यादपुर वडा नं. १ बस्ने हीरामन मुखियाकी ६ वर्षकी छोरी शिला कुमारीलाई घरमा सुतिरहेको ठाउ“बाट उठाइ लगी करिब २ किलोमिटर पूर्व दक्षिण लालबकैया नदीको पुलनजिक जबरजस्ती करणी गरी लालबकैया नदीमा फालेको आरोप लगाउ“दै जिप्रका रौतहटले जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको बताएको छ । यसैगरी गरुडा–५ शिवनगर बस्ने बिगु भन्ने मगनी महराकी छोरी वर्ष ४ की बबिताकुमारी रामलाई घरमा आमाको साथ सुतिरहेको अवस्थामा साउन १० गतेका दिन उठाइ लगी जबरजस्ती करणी गरी नहरको पानीमा फालेको आरोपसमेत चौरसियामाथि लगाइएको छ । घरमा सुतिरहेकी बालिकालाई निद्रामा नै उठाएर एकान्त कसैले नसुन्ने सुनसान स्थानमा लगी जबरजस्ती करणी गरी पानीमा फाल्ने अपराधी स्वभावको चौरसिया रहेको प्रहरीले बताएको छ । निज चौरसिया एकोहोरो, आपराधिक मनोवृत्तिको, निज सानैदेखि चोरीमा संलग्न रहेको शुक्रवार जिप्रका रौतहटमा आयोजित पत
कबड्डी सङ्घको राष्ट्रिय भेला
प्रस, वीरगंज, १० भदौ÷ नेपाल राष्ट्रिय कबड्डी सङ्घको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समिति वीरगंजको कार्यालयमा सम्पन्न भेलाले शिवजीप्रसाद गुप्ताको अध्यक्ष्ँतामा १५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्ष क्यामुद्दीन मन्सुर, महासचिव ओमप्रकाश महतो, सचिव जयप्रकाश गुप्ता र कोषाध्यक्ष्ँमा शान्ति कार्की रहेका छन् । यसअघि भेलाको उद्घाटन नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष्ँ एवं पूर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले गरेका थिए । नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मानदेव हजराको अध्यक्ष्ँतामा सम्पन्न भेला उद्घाटन समारोहमा सांसद विचारी यादव, एमाले प्रचार विभाग सदस्य अरविन्द सिंह, राखेपका सदस्य महम्मद समिउल्लाह, खेलकुद विकास समिति पर्साका अध्यक्ष्ँ सुदीप पौडेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण जवाहिर अन्सारीले गरेका थिए ।
शहीद कप क्रिकेटको उपाधि छपकैयालाई
प्रस, वीरगंज, १० भदौ÷ वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयको सहयोगमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साले आयोजना गरेको शहीद कप वडास्तरीय क्रिकेटको उपाधि छपकैयाले जितेको छ । नारायणी र·शालामा शुक्रवार सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा छपकैयाले मुर्लीलाई ९ रनअन्तरले पराजित गरी उपाधि जितेको हो । पहिले ब्याटिङ गरेको वीउमनपा–३ छपकैयाले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा ब्याटिङ गरेको वीउमनपा–१५ मुर्लीले १३.४ ओभरमा ५ विकेट गुमाइ ८४ रन बनाएपछि पानी परेको थियो । वर्षाको कारण डकवर्थ लुइस प्रणालीबाट छपकैयालाई ९ रनअन्तरले विजयी घोषित गरिएको थियो । छपकैयाको तर्पmबाट अमित श्रीवास्तव बेस्ट ब्याट्समैन, मुर्लीका बाबुजान अली बेस्ट बलर र वडा नं. १६ का हासिम अन्सारी म्यान अफ द सिरिज घोषित भएका थिए । प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीलाई पूर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले र उपविजेतलाई सांसद विचारी यादवले शिल्ड, मेडल, प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । कार्यक्रम खेलकुद विकास समिति पर्साका सदस्य श्रीनिवास महतोको अध्यक्ष्ँतामा भएको थियो र खेलकुद विकास समिति पर्साका
उमाशड्ढर द्विवेदी बृहस्पतिको आज्ञा पाएर अग्निदेवले तालहरूमा, पोखरीहरूमा तथा समुद्रसमेतमा इन्द्रको खोजी गरे । खोज्दाखोज्दै उनी त्यस सरोवरमा पुगे, जहा“ इन्द्रदेव लुकेर बसेका थिए । त्यहा“ उनले देवराज इन्द्र एउटा कमलनालको तन्तुमा लुकेर बसिरहेको फेला पारे । अनि उनले बृहस्पतिलाई इन्द्र कमलनालको तन्तुमा लुकेर बसिरहेको बारेमा सूचना दिए । यो सुनेर बृहस्पति देवर्षिहरू र गन्धर्वहरूसहित त्यस सरोवरको डिलमा पुगी इन्द्रको प्राचीन कर्महरूको उल्लेख गर्दै उनको स्तुति गर्न थाले । यसबाट बिस्तारै–बिस्तारै इन्द्रको तेज बढ्न थाल्यो र उनी आप्mनो पूर्वरूप धारण गरेर शक्तिसम्पन्न हुन पुगे । उनले बृहस्पतिसित भने– “भन्नुहोस्, अब तपाईंको कुन कार्य शेष रहेको छ ? महादैत्य विश्वरूप त मारियो नै र विशालकाय वृत्रासुरको पनि अन्त्य भइसक्यो ।” बृहस्पतिले भने– “देवराज, नहुष नाम गरेको एउटा मानवराजा देउता र महर्षिहरूको तेजोबलले बढेर उनीहरूको अधिपति भइसकेको छ । उसले हामीलाई धेरै दुःख दिइरहेको छ । तपाईंले उसको नाश गर्नुहोस् ।” बृहस्पति र इन्द्रबीच वार्तालाप भइरहेको बेला त्यहा“ कुबेर, यम, चन्द्रमा र वरुण पनि आइपुगे । जम
अभय भट्टराई नेपालको पर्यटकीय स्थल भनेर पोखरालाई चिनिन्छ । सानो ठाउ“ र थोरै क्ष्ँेत्रफलमा पैmलिए पनि पोखराको आकर्षणले सबैको मन सुटुक्क तानेको छ । प्राकृतिक सुन्दरताले सजिएको हुनाले पनि सबैलाई पोखरा मन परेको हो । फेवाताल, तालबाराही, पाताले छा“गो (डेभिड फल), विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महेन्द्र गुफा, गुप्तेश्वर महादेव, सेती नदी, चमेरो गुफा, क्षेत्रीय सङ्ग्रहालय, गोरखा सैनिक सङ्ग्रहालय, हवाई मैदान आदि पोखरामा भएका आकर्षणका केन्द्र हुन् । केही दिन पहिले म आप्mना केही साथीहरूस“ग पोखरा यात्रामा गएको थिए“ । वीरगंजदेखि पोखरासम्मको यात्रा बसमा करिब १० घण्टा लामो छ । बिहान ६ः३० बजे वीरगंजबाट खुलेको बसले अपराह्न ४ः३० बजेतिर पोखराको पृथ्वीचोकमा उता¥यो । त्यहा“बाट हामी ट्याक्सीमा लेकसाइटतिर लाग्यौं । ट्याक्सीले हामीलाई फेवातालतिर छोडिदियो । पोखराको बीच भागमा फेवाताल पर्दछ । फेवातालमा डु·ा चलाएको भर्खरै जस्तो लाग्छ । त्यहा“ भएका धेरै डु·ामध्ये आपूmलाई मन परेको डु·ा भाडामा चलाउन पनि पाइ“दो रहेछ । हामीले पनि डु·ा भाडामा लिएर एक घण्टा फेवातालमा खेल्यौं । फेवातालको पारिपट्टिको ज·ल अति नै राम्रो देखिन्थ
विश्वराज अधिकारी मेरो अन्तरङ्ग मित्र दिवाकरकी पत्नी, राधाको बारेमा मेरी छोरी ग्रीष्मालाई मैले विस्तारमा यति धेरै कुरा बताएको थिए“, उनको भद्रताको, उनको बौद्धिकताको, उनको सुन्दरताको बारेमा यति प्रशंसा गरेको थिए“ कि ग्रीष्मा पनि तयार भएकी थिइन्, राधालाई भेट्न । ग्रीष्मा राधाको व्यक्तित्वबाट अति नै प्रभावित हुन पुगेकी थिइन् । हामी डिनरका लागि आमन्त्रित भने राधा र दिवाकर दुवैका तर्पmबाट भएका थियौं । प्रारम्भमा भने केवल म मात्र राधालाई भेट्न र डिनर खान जाने योजना बनेको थियो, नेपाल पुगेपछिको दोस्रो दिन । नेपाल आउनुपूर्व मैले न त राधाको बारेमा, न त दिवाकरको बारेमा ग्रीष्मालाई केही भनेको थिए“ । उनलाई पटक्कै थाहा थिएन । अमेरिकादेखि नेपालसम्मको बाटोमा मैले ग्रीष्मालाई राधाको बारेमा भने बताएको थिए“ । ग्रीष्मा र म अमेरिकाबाट नेपाल पुगेका थियौं, करिब दुई महिनाको छुट्टी बिताउन । मैले अध्यापन गर्ने र ग्रीष्माले पढ्ने, दुवै कलेज ‘समर भेकेसन’ भएको कारणले बन्द थिए, अनि घुम्न सजिलो भएको थियो पनि । ग्रीष्माले मास्टर्स गर्दै थिइन् । काठमाडौं, लाजिम्पाटस्थित राधाको घर पुग्ने क्रममा हामी ब